Amasu we-5 Wokushayela Okuningi Ukubuyela Ekuthengisweni Kwesikole ngo-2019 | Martech Zone
I-Back-to-School yisizini yesibili enkulu kakhulu yokuthenga yonyaka futhi umhlaba wedijithali usuyingxenye ebalulekile yokuthengwa kwendlela yekhasimende.
Buyela Ekusebenziseni Imali Esikoleni
Lo nyaka, i I-NRF ilinganisela ukubuyela ekolishi ukusebenzisa wedwa kuzobala i okumangazayo $ 54.5 billion.
Kanye nokusetshenziswa kwe-k-12, inani lokuthenga esikoleni lilinganiselwa ku- $ 80.7 billion, phansi kusuka ku- $ 82.8 billion ngonyaka odlule.
Ngo-2018, amaphesenti angama-23 emali esetshenziselwe ukubuyela esikoleni yenzeka online. Kulo nyaka, Amaphesenti angama-29 okuthenga emuva ezikoleni azoba ku-inthanethi.
Ngo-2018, abathengi be-k-12 ababuyela esikoleni basebenzise isilinganiso esingu- $ 685 ngomuzi ngamunye ezintweni ezihlobene nesikole… balindele leyo mali kukhuphuke kuye ku- $ 696.70 ukusetshenziswa kwemali yesikole ngomuzi ngamunye.
Ukusetshenziswa kwemali yokubuyela ekolishi kwengeze enye imali engama- $ 280 kumuzi ngamunye ngenani eliphelele $ 976.78 ekusetshenzisweni kwemali ehlobene nasekolishi umndeni ngamunye.
Ngokusho kukaDeloitte, Amaphesenti angama-57 emali esetshenzisiwe yokubuyela emuva esikoleni abesesitolo vs online ngonyaka odlule. Kulo nyaka, inani licishe lifane, ngamaphesenti angama-56.
Ngenkathi omama bethenga kakhulu, Obaba kukhona ukusebenzisa imali engaphezulu kwama- $ 115 ekuthengeni izikole.
Lokhu infographic kusuka The Shelf, Zonke Izibalo Ozidingayo Ukuzamazama Umkhankaso Wakho Wokubuyela Esikoleni, yembula amasu ama-5 abathengisi abangazisebenzisa ekuthengeni okubuyela emuva esikoleni:
Abazali abacindezelwe isikhathi bathembele kwezenhlalo neziselula ekuthengeni izinqumo, ngakho-ke qiniseka ukuthi ngezifiso futhi ukuhlela ezinye izinhlinzeko ezinhle.
Cabanga ngokusebenzisa i- Iziqalo ezintsha umkhankaso wokuthinta imizwa abazali abazizwa ngayo ngezingane zabo eziqala esikoleni esisha noma ekolishi.
Buza abameli bomkhiqizo nabashushisi ukufaka imikhiqizo yakho kokuthunyelwe asebevele besebenza kukho.
Uzakwethu no Omama Ama-Blogger ukukusiza ufike phambi kwabathengi nokukunikeza okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi.
Abazali abane izingane eziningi bafuna izindlela zokonga ikakhulukazi, ngakho-ke bhangqa imikhiqizo yakho bese ubeka okuqondiwe kwakho kumaphakeji athengekayo.
Nayi i-infographic ephelele enemininingwane emisha emangalisayo yabathengisi be-2019 nezinkampani ze-e-commerce:
Tags: 2019ngibuyele ekolishiubuyele esikolenibuyela ezitoloukumaketha okubuyela emuva esikoleniukuthengisa emuva esikoleniukusetshenziswa kwemali emuva esikolenikhomba ngaphakathi
Izeluleko Ezingama-20 Zokushayela I-Traffic Ehambisanayo ku-Trade Show Booth Yakho